Kugara Kwevadzidzi | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Nguva yechando Camp
Elementary & High Chikoro Chirongwa
Chirungu & French
Vakuru & Vechidiki vakuru
TEFAQ Kugadzirira Bvunzo
Vechidiki & vana
Yunivhesiti yePrince Edward Island (UPEI)
Saint Michael's Koreji Yunivhesiti
Nzvimbo dzokugara dzakasiyana
Iva mhuri yakagamuchirwa
Zuva rokutanga remakirasi
Mushure memabasa eChikoro
Online mutauro musasa
Chirungu Kuiswa bvunzo
French Kuiswa bvunzo
Kukubatsira iwe kuwana iyo chaiyo nzvimbo yekugaraKwekugara kwevadzidzi
Rarama SEZVINOTAURAKUDZIDZA KUDZIDZA
Ugaro hwekugara iri sarudzo yevadzidzi vanofarira kusununguka uye yekuvanzika yekugara vega. Iwe uchave neyakavanzika kana yekugovana kamuri, zvinoenderana newako chikumbiro (s). Zvichienderana nesarudzo dzakasarudzwa, kicheni, yekugezera uye yekuwachira zvigovaniswa nevamwe vadzidzi. Iwe unofanirwa kuchengetedza inokwana mwedzi miviri - mitatu zvisati zvaitika - sezvo mavara ari mashoma uye anogona kungobhurwa kwemwedzi mumwe chete kana kupfuura.
Mhando iyi yekugara inongowanikwa yevadzidzi vezera ramakore gumi nematanhatu.
Inowanikwa mukati mekufamba chinhambwe kubva kune yedu main campus, evo isarudzo yakakwirira-yekupedzisira uye yemadhorobha kune vadzidzi vanoda kunyatsobereka masikati uye uve nekunakidzwa chaiko manheru. evo yakagadzirirwa zvakananga kune vadzidzi, iine mamiriro-e-iyo-zviwanikwa munzvimbo ine hupenyu hwakasimba, hunodhura uye hwese-hunobatanidza munharaunda mararamiro.
evo iri padyo neguta, Old chiteshi, Lachine Canal uye zvimwe zvekushanya uye tsika zvinokwezva. Yakawanda yemitambo mabara uye padivi penzira mareshi ari padyo. Iwe unenge uine mukana wakananga kuMetro.
Unogona kunakidzwa evo's mukamuri yemitambo, sangana pamwe neshamwari nyowani muma lounges kana ma kitchens, kana kusagadzikana panguva-isiri mubedhi yemitambo kana yeresitorendi. Iwe unogona zvakare kurova kumitambo, enda kushambira kana kutora iyo yoga kirasi kuti urambe wakagwinya, shanyira raibhurari, computer lab, yekufunda lounges uye nzvimbo yekudhinda kuti ugare kumusoro kwekirasi yako.
Imwe kana Yega mukamuri
Mhepo-yakarongedzerwa uye makamuri enzvimbo
Nzvimbo yeimba yekutandarira yakavhurwa 24/7
Get together lounges & fully equipped kitchens
Imoor inopisa dziva
Kamuri yekuwachira ($ $)
Yemahara Wi-Fi uye tambo
Kupisa, mvura inopisa, uye magetsi zvinosanganisirwa
24 / 7 kuchengeteka
Suite 400, 70 Rue Notre Dame Ouest
Muvhuro - Chishanu: 8:30 AM - 5 PM